6 imibono yokuhlobisa i-aquarium | Okwezinhlanzi
Kukhona imihlobiso eminingi enemibono emihle yokuhlobisa i-aquarium, kusuka emadwaleni noma ezindukwini kuya ezibalweni zakudala ezinezifuba nokuhlukahluka noma ukucabanga okuningi, njengophayinaphu lapho kuhlala khona iSpongeBob.
Nokho, Akukona nje kuphela ngokukhetha imihlobiso esiyithanda kakhulu i-aquarium yethu, kodwa futhi nokwazi leyo esingakwazi ukuyibeka, kanye nokwazi ukuthi ungawahlanza kanjani namathiphu wokuhlobisa. Konke lokhu sizokuhlanganisa kulesi sihloko. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ufunde lokhu okunye okuthunyelwe mayelana ukuhlobisa phansi kwe-aquarium yethu uma kwenzeka ufuna eminye imibono.
1 Imibono yokuhlobisa i-aquarium yakho
1.1 Amatshe noma isihlabathi
1.3.1 Izitshalo zokufakelwa
1.3.2 Izitshalo zemvelo
1.5 Imihlobiso yokufakelwa
1.6 Iphepha elihlobisayo
2 Yini ongakufaki ku-aquarium
2.2 Izakhi zemvelo ezingalashwa
2.3 Imihlobiso engalungiselelwe
3 Ungayihlanza kanjani imihlobiso
4 Amathiphu okuhlobisa
Imibono yokuhlobisa i-aquarium yakho
Ngaphandle kokungabaza, ukuhlobisa i-aquarium kungaba ngomunye wemisebenzi emnandi kakhulu, njengoba sikwazi ukukhanyisa ukubuka kwe-aquarium yethu futhi sikhiphe ukuthi iyindawo elula enamatshe amane kanye nesitshalo seplastiki esishwabene. Ngokuphambene nalokho, emakethe sinezinketho eziningi:
Amatshe noma isihlabathi
UDehner - Gravel ka ...
ICroci A4022043 Gravel ye ...
Isisekelo sawo wonke ama-aquarium, ngokoqobo, sinjalo amatshe noma isihlabathi, esibekwa phansi. Ngenkathi i-gravel iza ngesimo samatshe (ngokubukeka okungokwemvelo noma okunemibala, nosayizi ohlukile), isihlabathi silungile kulezo zinhlanzi ezivame ukuzingcwaba kuwo noma zichitha isikhathi sabo esiningi phansi endaweni yazo. , njengama-eels.
Nokho, kwesinye isikhathi igravel yisixazululo esihle kunazo zonkeikakhulukazi ukuze siduduzeke. Isibonelo, enye yezingqinamba ezinkulu zesihlabathi ukuthi ukuyihlanza kusinda kakhulu, nokuthi ithambekele ekufikeni yonke indawo, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi uyisuse kaningi.
Futhi, kunconywa kakhulu ukuthi ukhethe izinto zemvelo, ngoba uma zenziwe noma ingilazi ngeke zivumele izimbali ezinhle zebhaktheriya (khumbula, kubalulekile ukuthi i-aquarium) ivele kalula.
Umhlobiso we-Hygger ...
Nobby, Itshe Lokuhlobisa ...
Uma ufuna ukunikeza i-aquarium yakho ukuthinta kwe-rustic, ungakhetha izingodo. Ziningi iziqu zamanga ezivaleke amehlo ezitolo zezilwane noma e-Amazon ezilingisa kahle kakhulu imvelo, futhi, ngaphezu kwalokho, ekubeni zenziwe aziboli, ngakho-ke zinganikeza indawo yokuhlala engapheli yenhlanzi yakho.
Yize kungenzeka ukusebenzisa izinkuni zemvelo ku-aquarium, kufanele uqaphele kakhulu, njengoba kuyinkinga ebucayi kakhulu. Ezinye izinhlobo zezinkuni, isibonelo, zikhiphela ama-asidi emanzini angabulala izinhlanzi zakho. Iningi futhi liyantanta, ngakho-ke kuzofanele ubaphathe kuqala noma ubaphakamisele ezansi ngetshe, isibonelo. Ngakho-ke, akunconywa ukuthi usebenzise izinkuni oziqoqile, ngaphandle kokuthola okuhlukahlukene futhi ngaphandle kokubheka ukuthi ngabe basebenzise isibulala-zinambuzane.
Izimila zeVibury ...
Isitshalo Esingaziwa DE...
Izitshalo Yiminye yemibono yakudala yokuhlobisa i-aquarium yethu. Zingaba zokwenziwa noma zemvelo, njengoba sizobona ngezansi.
Akungabazeki yizona ezilula ukunakekelwa (empeleni ngoba abadingi ukunakekelwa). Ngaphezu kwalokho, bavame ukuba nemibala enemibala eminingi futhi banikeze indawo yokukhosela izinhlanzi zakho ngaphandle kokwesaba ukuthinta impilo yabo kabi. Futhi, azife noma zibole, ezingakhipha izinhlayiya emanzini eziphakamisa izinga le-nitrogen, elingacindezela futhi ligulise izinhlanzi zakho.
Yize kunganconyelwa kakhulu abaqalayo, izitshalo zemvelo nazo zinenzuzo yazo. Isibonelo, ukunakekelwa kahle kwe-oksijeni ekhishwayo lapho usebenzisa i-CO2, into ehlala inconyelwa izinhlanzi zakho (khumbula ukuthi zidinga i-oxygen ukuze ziphile). Kodwa-ke, lapho uthenga izitshalo zemvelo qiniseka ukuthi zingena embizeni enenzalo ukuze ungatholi ama-stowaways, njengeminenke, angahlasela i-aquarium yakho.
Amatshe, njengezingodo, angenye yezinto zakudala zokuhlobisa noma iyiphi i-aquarium. Ungabathola ezindaweni eziningi futhi, kulokhu, ukusetshenziswa kwamatshe emvelo akuyona ingozi njengaleyo yezingodo. Noma kunjalo, ukuze uqiniseke ukuthi ziphephile ukusebenzisa, zifake emanzini izinsuku ezimbalwa bese ubheka ukuthi i-pH ayikashintshi yini.
Olunye uvivinyo lokuhlola ukuthi itshe olikhethele i-aquarium yakho alinawo ama-acid angabulala izinhlanzi zakho, ngokushesha okukhulu uthele uviniga etsheni. Uma ungenzi lutho, leli dwala liphephile. Ngakolunye uhlangothi, uma iqhuma, iqukethe ama-acid, ngakho-ke akufanele uyingeze ku-aquarium. Lokhu kuhlolwa kungenziwa futhi nge-hydrochloric acid, kodwa kuyingozi kakhulu (ngiyakutshela ngokuhlangenwe nakho: udadewethu, oyisazi sokuma komhlaba, wake washiya ibhodlela eligcwele lamanzi futhi ngacishe ngafa).
Imihlobiso yokufakelwa iyathengiswa ezindaweni eziningi futhi, ngaphezu kwakho konke, ikulungele ngokuphelele ukucwiliswa, ngakho-ke ngeke kudingeke uhlupheke ngezinhlanzi zakho. Futhi uma lokho bekunganele, baveza izinhlobo ezimangazayo zezithombe, ikakhulukazi phakathi kwezinto zakudala (abatshuzi, izifuba zomcebo, imikhumbi eshonile, izigqoko zokuvikela ukuhamba, amanxiwa, izakhiwo zaseMpumalanga, amaBuddha ...) kokunye okucatshangelwayo (i-Stonehenge, uphayinaphu lukaSpongeBob, i-Star Wars AT-AT, izintaba-mlilo, amakhowe, izingebhezi ...).
Isendlalelo se-Balacoo Poster ...
Uma ufuna ukunikeza i-aquarium yakho ukujula kancane, amaphephadonga ayisixazululo. Azidwetshiwe empeleni, kepha ziyizithombe eziphrintiwe, imvamisa ephepheni elinamathelayo, ongazinamathisela ngemuva kwe-aquarium (kusobala ngaphandle). Iningi lakhiwe njengolwandle, yize ungathola futhi ezinye ezinamahlathi, izimpophoma ... Noma ungazitholi izithombe ozithandayo, ungakhetha ukuphrinta eyodwa. Kunconywa kakhulu ukuthi kulokhu uyinamathe, ngoba, noma ngabe iphuma emanzini, ekugcineni izomanzi.
Yini ongakufaki ku-aquarium
Kukhona eyodwa uchungechunge lwezinto okungafuneki ukuzifaka emanzini, njengoba sizobona ngezansi, nokuthi ungalingeka ukuthi ucwilise. Ngokwesibonelo:
Amakhorali mahle, kepha imvamisa igcwele ubuthi namagciwane lokho kungonakalisa imvelo yakho yasolwandle. Ngaphezu kwalokho, amakhorali afile anombala othungathekile futhi mubi impela, into embi, ngakho-ke kuyohlale kuneseluleko esihle sokukhetha inketho yokufakelwa kepha ipholile futhi iyajabulisa iso.
Izakhi zemvelo ezingalashwa
Ngaphambi kokuthi sikunikeze imibono embalwa yokuphatha izingodo namatshe wemvelo ofuna ukuwafaka emanzini. Noma kunjalo, uma ungaqiniseki futhi ungumuntu omusha kulo mkhakha, kungcono uhambe uyofuna amatshe nezinti zokufakelwa.
I-Indian plastic ingathandeka kakhulu ku-aquarium yakho, kepha kufanele wazi ukuthi akuyona umhlobiso ophathwe ukuthi ucwiliswe emanzini, ngakho-ke kungaba yingozi ezinhlanzini nasezitshalweni zakho. Kwenzeka into efanayo ngeminye "imihlobiso" ongayiphathanga noma engahloselwe kanjalo, isibonelo, izinhlamvu zemali, amaminerali, ingilazi ependiwe ...
Ungayihlanza kanjani imihlobiso
Njalo, njengoba kubonakala, kuzodingeka uhlanze imihlobiso onayo ku-aquarium yakho. Okwakho:
Okokuqala, ulwelwe oluhlanzekile nezitshalo zokufakelwa onayo e-aquarium ngaphandle kokukhipha amanzi nangebhulashi. Ungabi nolaka kakhulu uma ungafuni ukuzilayisha.
Khona-ke, hlanza amatshe kusuka phansi nge-vacuum vacuum. Ngale ndlela ngeke nje uhlanze amatshe, kepha ungawasebenzisa futhi ukushintsha noma ukugcwalisa amanzi.
By indlela uma uhlanza imihlobiso ngaphakathi, ungasebenzisi ibhulashi elinzima kakhulu uma ungafuni ukuklwebha izithombe.
Noma ngabe zikhona izinyathelo ezimbalwa ezilula, iqiniso ukuthi kungenye yezinto ezinzima kakhulu lapho kugcinwa i-aquarium, kepha kubaluleke kakhulu ukugcina inhlanzeko enhle.
Ekugcineni yini i-aquarium yakho ipholile noma njengenhlanganisela enezinto eziyinkulungwane lapho izinhlanzi zingabonakali khona, akuxhomekile kuphela emalini esiyisebenzisile noma enanini lezibalo esizibekile. Ngokwesibonelo:
Cabanga ngalokhu isikhala yini onayo futhi yini ofuna ukuyibeka (izitshalo zokufakelwa noma zemvelo, izibalo ...)
Uma kuyi-euhlelo lwasolwandle, isihloko sasolwandle sizoba ngcono, kanti uma kungamanzi angenasawoti, umfula.
Cabanga ngohlobo lwe amatshe noma isihlabathi ifanele izinhlanzi zakho.
Musa ukubeka izinto eziningi ndawonye uma ungafuni ukucindezela izinhlanzi zakho noma une-aquarium egcwele ngokweqile. Izitshalo zemvelo nazo zidinga isikhala esithe xaxa.
Uyacabanga engeza into ethile enezimbobo lapho izinhlanzi ezingacasha khona.
Isilinganiso esisodwa esisebenza kahle kakhulu ukukhetha ukusibeka isiqeshana esikhulu maphakathi nezimbalwa ezincane ekugcineni.
Ngezikhathi ezithile kuba Kunconywa ukuthi uhambise izithombe nezimhlobiso ezansi kwe-aquarium (kusobala ukuthi lokhu akusebenzi ezitshalweni zemvelo) ukunikeza ukuhlukahluka wena nezinhlanzi zakho.
Siyethemba ukuthi le mibono yokuhlobisa i-aquarium isebenze njengesiqondisi sokwenza eyakho ipholile ngempela. Sitshele, wake wahlobisa i-aquarium noma uzizwa ulahlekile? Ingabe ungaphezulu kwezitshalo zemvelo noma zokufakelwa? Ingabe kukhona umhlobiso owuthanda kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » 6 imibono yokuhlobisa i-aquarium